Amiir Maxamed bin Salman oo laga xaday Dokumenti ay ku jiraan sir xasaasi ya | Qaran News
Amiir Maxamed bin Salman oo laga xaday Dokumenti ay ku jiraan sir xasaasi ya
Writen by Qaran News | 4:56 am 26th Jun, 2020
Dhaxal-sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa amray in lasoo xiro qoyska sarkaal horay uga tirsanaa sirdoonka si cadaadis loogu saaro in uu soo gacan geliyo dokumentiyo xasaasi ah oo uu la baxsaday, Reuters ayaa sidaas werisay.
Afar ilo-wareed oo xaalada ka warqaba lana hadlay wakaaladda wararka Reuters, ayaa sheegay in dhaxal suguhu uu amray in la xiro qaraabadda Saad Al-Jabri iyadoo ujeedadu ay tahay in sarkaalka sirdoonka horay uga tirsanaa lagu qasbo in uu Sucuudiga uu kusoo laabto kana yimaado Canada oo uu hadda deganyahay.
Xarigga ilmaha waa-weyn ee Al-Jabri, waxaa la sheegay in Maxamed bin Salmaan uu ku doonayo in uu ku helo qoraalo sir ah oo la qoray xilligii uu xafiiska joogay saraalka baxsadka ah, xilligaas oo uu muddo fog la taliye u ahaa Maxamed bin Nayef.
Bin Nayef oo ah Maxamed bin Salmaan ina adeerkiis waxaa uu ahaa dhaxal sugihii hore ee taajka sucuudiga, waxaana jagadaas laga tuuray 2017-kii.
Ka skoow in uu doorkii dhaxal-sugenimo wareejiyay, bin Nayef waxaa mar kale la xiray bishii March ee sanadkii lasoo dhaafay taasi oo qayb ka ahayd xarigga saraakiil boqortooyada ka tirsan kuwaas oo Maxamed bin Salmaan uu u arkayay in ay khatar ku yihiin awooddiisa.
Ilo-wareedyadu waxay sheegeen in maalmo kadib markii dib loo xiray amiirka, wiil 21 jir ah iyo gabar 20 jir oo uu dhalay Al-Jabri in iyagana la xiray kadib markii la weeraray gurigii ay ka degenaayeen Riyadh, waxaana ku xigay Al-Jabri walaalkiis oo la xiray May.
Mid ka mid ah ilo-wareedka ayaa Reuters u sheegay “Muddo ayey doonayeen in Al-Jabri maadaama uu ahaa gacanta midig u ahaa Maxamed bin Nayef.”
Qoraaladaas xasaasiga ah ee uu hayo sarkaalka hore ee sirdoonka, sida ay Reuters sheegtay, waxay ka kooban yihiin akhbaar loo isticmaali karo kuwa siyaasadda uga soo horjeeda Maxamed bin Salmaan iyo sidoo kale akhbaar si dhab ah u dhaawici karta dhaxal sugaha iyo aabihiis boqor Salmaan.
Sidoo kale qoraaladdu waxay ka koobanyihiin akhbaar ku saabsan hanitida uu dibadda ku leeyahay Maxamed bin Nayef, taasi Maxamed bin Salmaan uu u adeegsan karo amiirka xiran.
Mid ka mid ah ilo wareedka ayaa, oo ahaa sarkaal hore oo amni gobol, ayaa sheegay in Al-Jabri uu sidoo kale heysto feylal ay ku jiraan faah-faahin lacageed iyo macaamilka saraakiil sare ee boqortooyadda ka tirsan.
Qoyska Al-Jabri waxay raadinayaan taageeradda Maraykanka oo ah xulufo u dhow Sacuudiga, iyagoo rajeynaya in cadaadis uu boqortooyadda ku saaro sii deynta xubnaha qoyska ee xiran.